theZOMI: Burma News International - March 7, 2013
Burma News International - March 7, 2013
Wa, Mongla to join Kachin-Naypyitaw peace talks
The United Wa State Army (UWSA) and the Mongla-based National Democratic Alliance Army (NDAA) will be attending the next round of peace talks between the Kachin Independence Organization / Kachin Independence Army (KIO/KIA) and the Union Peacemaking Working Committee (UPWC) led by U Aung Min due to be held sometime this month in Ruili, Yunnan province, according to sources.
Htone Bo villagers have demanded that the Shwe Energy (Asia World) Company allow them to work in their lands in the project area of the Thauk Ye Khat2hydro-power-dam that is now producing electricity.
Many rock mountains located at the main area of the Shwe Gas project in Arakan state have been blown up by mines to produce rocks for the shwe gas project implemented by the Chinese government, saidareport from residents in Kyauk Pru township.
The Bangladesh Trade Fair started in Rangoon recently. One participant said the purpose of the trade fair, the only one of its kind in Burma, is to popularize Bangladeshi-made products.
“Myanmar is working tirelessly for democratic change and foralasting peace,” President Thein Sein told the Chairman of the European Parliament Committee on Foreign Affairs at the European Parliament in Brussels on Tuesday evening.
Forex licenses issued to private businesses in Myanmar
The Central Bank of Myanmar has issued money changer licenses to three private businesses, according toareport in the state-run newspaper The New Light of Myanmar on March 7.
Nasaka (Burma border security force) arrested7Rohingya villagers, all from Udaung village in Maungdaw Township, over allegations of being involved in the murder of other Rohingya and Burman villagers on March 1, according toabusinessman from Alay Than Kyaw. Two suspects were arrested in the village and the other five were arrested while working in their paddy fields on March 4, according to one of the victim’s relatives.
Nasaka (Burma’s border security force) have been exploiting the sectarian violence that erupted in Arakan state last June and October to extort money from Rohingya villagers, according toalocal leader who didn’t want their name used for security concerns.
Seven villagers that were detained by Nasaka (Burma’s border security force) for constructingafence aroundapond used for drinking water were released after paying bribes of 20,000 Kyat per person, according to sources who spoke to Kaladanpress on conditions of anonymity.
Despite ceasefire arrangements villagers in Karen State are worried that unscrupulous local officials will force them off their farmland and business interests wanting the land for development projects. Recent cases of confiscated land in the Tontay Township region have seen local politicians take up the case on behalf of the villagers.
Karen villagers in the Pa-an Township area have managed to carve outaniche for themselves while stopping large construction companies from monopolizing the local quarrying business.
လာမည့် KIA နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ UWSA နှင့် မိုင်းလား ပါဝင်မည်
မကြာမှီကျင်းပမည့် ကေအိုင်အေ နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် နှင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့တို့ အသိသက်သေအနေဖြင့် တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်းခံရကြောင်း နီးစပ်သည့်အသိုင်း အဝိုင်းကပြောသည်။
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ လာမည့် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့၌ တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း KIO က ပြောသည်။
အစိုးရ၏ ကချင် ဒုက္ခသည် ပြဿနာ အပြောနှင့် လက်တွေ့ ကိုက်ညီမှု မရှိ
ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအား အကူအညီ ပေးတော့မည်ဟူသော အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များသည် ယနေ့အထိ အကျိုး သက်ရောက်မှု မရှိသေးကြောင်း ဒုက္ခသည် စခန်း တာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆာက ပြောသည်။
ညီညွှတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အနာဂတ်ရေးအတွက် ကရင်ရေးရာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည်
ကရင့်တမျိုးသားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အနာဂတ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးသွားရန် ကရင့်ရေးရာ အစည်းအဝေး တစ်ရပ်ကို ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၌ ယခု မတ်လကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ကမ်းထောင်းကြီးတွင် ထွေလာဂျီမှောက် တစ်ဦးသေ၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ်အပိုင် ကမ်းထောင်းကြီးကျေးရွာတွင် မတ်လ ၆ ရက်နေ့က ထွေလာဂျီတစ်စီး ချောက်ထဲကို ထိုးကျ တိမ်းမှောက်သွားသဖြင့် ကျေးရွာသား ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မဆုတ်မနစ် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သမ္မတ ပြော
“ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ကြာရှည်ခံသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မဆုတ်မနစ် အလုပ်လုပ်နေသည်” ဟု မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဥရောပ ပါလီမန် နိုင်ငံခြားရေးရာ ဥက္ကဌအား ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ ဥရောပ ပါလီမန်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ညနေက ပြောကြားခဲ့သည်။
သျှမ်းနီအမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာငွေအခက်အခဲ ရှိနေသည့်တိုင်ယခုနှစ် အတွင်း ကချင် ပြည်နယ်၌ ပါတီရုံးများ ဆက်ဖွင့်နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောဆိုသည်။
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့၏ ပထမဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပ ပြီးစီး
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်တွင် အလင်းအိမ် လူငယ်စာဖတ်အသင်း၊ နှလုံးလှလူငယ်အဖွဲ့ နှင့် ရေးမြို့နယ်ရှိ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများ စုပေါင်းကျင်းပသော ပထမဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ပြီးစီး နိုင်ခဲ့ကြောင်း စာပေဟောပြောပွဲ စီစဉ်သူ ကိုကျော်စိုးတင့်က ပြောသည်။
၃၁ ကြိမ်မြောက် ရာမညနိကာယ ပရိယတ္တိမွန်စာဖြေပွဲကျင်းပမည်
မွန်ဆရာတော်ကြီးများကြီးမှူးသည့် ရာမညနိကာယ ပရိယတ္တိမွန်စာပြန်ပွဲကို အလှူရှင်များ၏စေတနာလှူဒါန်း ထောက်ပံ့ မှုဖြင့်နှစ်စဉ်ကျင်းပလာရာ ယခုနှစ်တွင်(၃၁)ကြိမ်မြောက်ရှိ လာပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းစာဖြေပွဲကို ၁၃၇၄ ခုနှစ် တပို့တွဲလကွယ်၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့မှ (၁၅) ရက်နေ့ အထိ မော်လမြိုင်မြို့သာသနာ့ ၂၅၀ဝ ကျောင်း၌ ကျင်း ပသွားမည်ဟုသိရသည်။